Umatshini opholileyo womoya opholileyo / owomileyo wokupholisa iTshayina Abavelisi - China Umatshini opholileyo womoya oCocekileyo / owomileyo wokupholisa ifektri kunye nabaxhasi
Ukufunxa amanzi Chiller / Ubushushu Pump
Umbane wombane weChiller / Ubushushu
Umoya opholileyo waManzi / iNqaba yokuPholisa eyomileyo
Uhlobo oluDutyulwe ngokuthe ngqo
Uhlobo lwaManzi ashushu
Uhlobo lwegesi yeFlue
Ukufunxa Ubushushu Pump
UkuBamba kweMagnetic Centrifugal Chiller
Amanzi apholileyo aCentrifugal Type Chiller / Pump Pump
Deep Hole Butt Welding Ubushushu umzimba
Ezibhijeleyo Tube Ubushushu umzimba
Ityhubhu ephindwe kabini yoTshintsho lobushushu
Ukhuseleko Ubushushu umzimba
TEMA Ubushushu umzimba
I-Inter Stage Cooler yeCompressor kunye neRegeneration Heater
Inkqubo yokupholisa ukomelela kwensimbi okrelekrele
Inkqubo yeKhomputha yomoya opholileyo ngqo (i-ACC)
Inkqubo yokupholisa eyomileyo ngokungathanga ngqo
Amanzi okonga kunye neplume yokunciphisa inkqubo yokupholisa eyomileyo
ulawulo olukrelekrele lwensimbi inkqubo yokupholisa eyomileyo
I-Shuangliang izinikele kuphando olusisiseko kunye nomsebenzi wovavanyo wenqaba yentsimbi ixesha elide, kubandakanya uvavanyo lwetonela lomoya lokupholisa inqaba yokulinganisa imodeli engqongqo, uvavanyo lwetonela lomoya lokupholisa inqaba yomoya yemodeli yokulinganisa ukungcangcazela, uvavanyo lokulwa ukuphumelela lokupholisa ukubopha inqaba, njl., Ukuvavanya nokuqinisekisa uyilo lwenqaba yesakhiwo sentsimbi kunye nokubonelela ngoovimba bobuchwephesha kuyilo olusebenzayo lwesakhiwo sentsimbi.
Inkqubo yomoya opholileyo womoya opholileyo
Inkqubo ye-ACC kukusasaza umphunga wokukhupha okhutshwe yi-turbine yomphunga ngqo kwi-unit condenser nganye ngombhobho. Umtshini omkhulu wokuhamba kwe-axial uphefumla umoya, ukhuphe ityhubhu evela ngaphandle, ususe ubushushu. Umphunga uyajiyana ungene emanzini kwaye ugqithe kwi-header esezantsi phantsi kwenyanda yetyhubhu ukuya kwitanki ye-condensate.
Kwizityalo zamandla obushushu, ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu oluveliswa yibhoyila ingena kumatshini womphunga ukwenza umsebenzi wokuqhuba umbane ukuvelisa umbane, kwaye umphunga wokukhupha ukhutshiwe kumsila we-injini yomphunga uye kwi-condenser ukuhanjiswa kobushushu kuqala.
ukonga amanzi kunye neplume yokunciphisa inkqubo yokupholisa eyomileyo
Idilesi: HAYI. INDLELA ENGAMA-88 XILI, LIGANG, JIANGYIN, JIANGSU, CHINA
Ifowuni: + 86-510-86638822
I-Shuangliang iphumelele i-TUAS IWMF yeNkunkuma yePow ...
UKUHANJISWA KWEZIPHUMO ZESHELE & TUBE ...
Intsebenziswano enzulu phakathi kweShuangliang kunye ...
Igalelo lamandla ahanjisiweyo
Amashishini abucala angama-500 aphezulu